Fidali-Aantete hasaawo giddo horoonsi'raanchu giggishshote qulfe xiiwannowote qorqorshu baruwi illacha afi'rannowa aanchine soorra dandiinanni.
Formete miilla bortajete giddora surkantuha ikkiro,LibreOffice umiloosaasinchimmatenni hiittoo garinni mittu qorqorshinni aanannohuwa milleessate Tab qulfe horoonsi'nanniwote gumulanno. Ledantinori baalanti qorqorshshuwi umisiloosaasinchimmanni hurrisu jeefora worantanno.Giggishshote aante hasaawo giddo, hurrisu aante annu annu hasatto garinni sumuu assa dandiinanni.
Qorqorshu mashalaqqishaanchi umisiti gumulantino akatta widoonni qorqorshu hasaawo giddo hasantanno hornyuwa eessatenni xawisa dandiinanni.
Raadoonete ilki gambooshshi giddo afama dandaannohu Tab qulfenni raadoonete qulfuwi mereero mittu "dooramino" widira gaamaminoha ikkirocallaati.Mitenti ilki akeekisaminokki dargira radoonete ilkuwa "doorantino" widira gaamiori nookkiha akeekinsiro, hakkunni gedensaanni horoonsi'raanchu kiiboordetenni mittonka raadoonete ilka afi'ra didandaanno.
Title is: Fidali Aante